Monday April 01, 2019 - 12:21:36 in Articles by Hadhwanaag News
Waxaynu wada ognanahay inaynu KU dhaqano dhaqan JAAHILIGA ah ee Qurayshtii iyo Carabtiiba
KU dhaqmi jireen diinta Ka hor weli Illaa yomanaa hadaa wax badani weli jiraan wax badanna Diinta Islaamka ay Ka baabisay Carabta. Inaga Somali sheegata dhaqankii JAAHILIGA ahaa ee Diintu Ka soo horjeeday OO weli xeerarka Somalidu KU dhaqanto ee nolosha dhinac kasta ood eegto hadday dhaxal Tay hadday dhiigtay, hadday IYO hadday dhaqaale tahay . U kuurgal dhaxalka waxaynu sidaynu yeello Diinta maba raacno ee xeer jajab la mida kii Qurayshtii iyo Carabtii Diinta Ka hor Isticmaali jireen baynu raacnaa. Dhiigga maba raacno sida Quraanku leeyahay ma yeelno umana dhowin ee dhaqankii JAAHILIGA ahaa baynu KU dhaqannaa , u fiirso magteenna haddii wax yar la bixiyo xittaa Sannaday qaadataa badina aar goosi dhaqan JAAHILIGA ah baynu KU dhaqannaa. Xagga shaqaalaha kii JAAHILIGA ayeynu KU dhaqannaa ee is boobka ,dhaca ahaa ( HA LA QADHAMSADO NIN QUWAAX HELA NIN ISKABA QADA). Nolosha aynu KU jirno dhaqan ahaan Distoor la xar xariiqay, Dimoqraadiyad la sheeg sheego, Dawladnimo lagu riwaayadeeyo waxaasoo dhan waxaa Ka adag oo hortaagan dhaqan JAAHILIGA aynu KU dhaqano marka la tooso Illaa la seexanayo. Madaxweyne kasta waxaa hor taagan oo Ka hor imanaya DHAQANKA JAAHILIGA ah ee ummaddu ee ummaddu (practice) to. Waxyaalaha dawladnimadeena hortaagani maaha Madaxweyne Xun ee waa dhaqan xumo jaahiliya oo Gidaar adaga.